Ceilistat raw powder for weight loss | Azu na-emepụta steroid
/blog/nke a/Nke a na-edozi maka ntụpọ ọnwụ
Ihe na 11 / 26 / 2017 by Dr. Patrick Young dere na nke a. O nwere 2 Comments.
Kedu ihe bụ Ceilistat / Ceilistat raw powder?
Nke a na-eji ọgwụ na-edozi agwọ a. Ọ na-eme n'otu ụzọ ahụ dị ka ọgwụ ndị na-eto eto ọgwụ ma ọ bụ na-eto eto site na-egbochi lipase pancreatic, bụ enzyme nke na-akụda triglycerides na eriri afọ. Enweghị enzyme a, a na-egbochi triglycerides site na nri ka a ghara ịmịnye ya hydrolyzed n'ime acy fatty acids na-adịghị emetụta ya ma bụrụ nke a na-enweghị atụ. N'ọnwa ụmụ mmadụ, leilistat ntụ ntụ gosiri na ọ ga-eme ka ihe nha dị ka nke a na-atụghị anya. Ọ na-ebute ọnwụ ma na-etinye abụba na nri. Ọgwụ ọjọọ ahụ na-eme n'ụzọ dị ala iji belata agụụ, na-enweghị emetụta ụbụrụ.
aha Ceilistat, Ceilistat ntụ ntụ, Ceilistat raw ntụ ntụ
molekụla arọ 401.58
Nchekwa temp. 2-8 ℃
Agba White ma ọ bụ na-acha ọcha uzuzu
Ceilistat raw ntụ ntụ mmetụta / mmetụta Ililistat
Obu ibu bu ihe otiti nke oge na mba ndi mepere emepe na mba na-emepe emepe, ugbua oke uju na oke ibu na-eme ka onwu karia oke. Ceilistat ntụ ntụ a na-ewere dịka ụdị ọgwụgwọ nke lipase. Ọrụ ọgwụ na-arụ site na igbochi metabolization nke abụba n'ime nri ka ị ghara ịkọ ya na abụba a na-adịghị ahụkebe ga-agafe n'ime ahụ na-emegharị ahụ. A ghaghi eji capsules tinyere obere calorie, nri nri dị ala na usoro mmega ahụ kwesịrị ekwesị iji na-emeso oke ibu. Ịbelata ihe oriri calorie na ịrụ ọrụ dị arọ nwere ike inyere aka igbochi ma mesoo ọnọdụ ndị dị ka cholesterol dị elu, ọrịa shuga, ọbara mgbali na ọrịa obi.
Nke a na-edozi ihe na-edozi akpụkpọ anụ / Ceilistat
Ceilistat ntụ ntụ abịa n'ụdị capsule na ọdịnaya ọgwụ na nke ọ bụla bụ 60mg. Gaa hụ dọkịta gị tupu ị jiri ọgwụ a maka ndụmọdụ maka ịhazi njikwa na nke mere na e nwere ike ịgbakọ usoro ọgwụgwọ ziri ezi. A na-ejide ọnụ capsules site na ọnụ ma were mmiri jupụtara na mmiri. A na-agwakarị ndị ọrịa ka ha were ya rie nri ka o wee nwee ike igbochi abụba ọ bụla na-ekpochapụ site na etinye ya. N'ọnọdụ nile, ndị ọrịa ga-ekwenye na usoro ọgwụgwọ nke dọkịta nyere ha ma jide n'aka na ọ dịghị mgbe a na-agafe usoro ọgwụgwọ kachasị karịa ka ime nke a nwere ike ime ka nsogbu ndị ọzọ pụta.
Ceilistat raw ntụ ntụ akụkụ utịp / Ceilistat n'akụkụ mmetụta
Ọ bụrụ na a ga - ejide ya, ọ ga - eme ka ọ bụrụ na ị ga -
Akwukwo nri ntụ ntụ / Ceilistat ịdọ aka ná ntị
Okpukpo nri nke ogwu nwere ike imetụta absorption ụfọdụ vitamin soluble nakwa ụfọdụ ụdị nri.
Inwe otutu nri nke nwere oke abuba abuba nwere ike ime ka o nwekwuo nsogbu.
Testosterone propionate ntụ ntụ: uru na mmetụta ndị ị ga-ama! Ụmụ nwanyị hà nwere ike iji Primobolan (Methenolone Acetate)?